आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताले भन्दैमा राजनेता हुन्छ ? बिपी कोइराला त राजनेता हुन सकेन केपी र प्रचण्डको कुरै नगरौं: डा,सुरेन्द्र केसी - नमस्ते खबर
आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताले भन्दैमा राजनेता हुन्छ ? बिपी कोइराला त राजनेता हुन सकेन केपी र प्रचण्डको कुरै नगरौं: डा,सुरेन्द्र केसी
काठमाडौ । बाम गठबन्धन एकताको प्रक्रियामा अघिबढिरहेको अवस्था एकातिर विद्यमान छभने अर्को तिर सरकारमा दुई दलले बहुमतको सरकार हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सत्ताधारी दलको तर्फ बाट मधेश केन्द्रित दुई राजनीतिक पार्टीलाई सरकारमा सामेल हुन दिनहुँको आग्रह छ। बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै दुई तिहाईको सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के को हतारो हो वा बाध्यता हो ? यस विषयमा माउन्टेन टेलिविजनले जिज्ञाशा राख्दा राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन :
मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुर देउबाको हातबाट संबिधान संसोधनको लागि जुन दुई तिहाइको खेल सम्भव भएन यिनीहरुको हातबाट त्यो खेल खेलाउनुका लागि त्यो खेल गरिरहेको जस्तो लाग्छ। संबिधान संसोधन हाम्रो एजेन्डा थिएन खुल्लम कुल्ला भारतले यो विषयलाई ब्रसेल्स,युके,न्युयोर्कसम्म चै पुर्याइरहेको थियो र नेपालको संविधानलाई बदनाम गराइरहेको थियो। त्यही नाममा हामीमाथि उसले डरलाग्दो नाकाबन्दी थोपरेको थियो। अहिले पनि उसैको प्रशन्नतामा र उसैको एजेन्डामा यो सब भैरहेको छ।
केपी ओलिमाथिको दुवै आरोप गलत थियो उनलाई राष्ट्रबादी भन्ने आरोप पनि गलत थियो र भारत बिरोधी भन्ने पगरी पनि गलत थियो।
राजनेता त्यस्तालाई भन्दैनन् राजनेताले त प्रतिपक्षलाई पनि एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रिय नेता हुने हैसियतको नेतालाई पो राजनेता भन्छन त यहाँ त केपी ओलीको पार्टी भित्रै गुटको कुरा भैरहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्णय गर्न नै आठ घण्टा लाग्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ।कहाँबाट राजनेताको प्रश्न आउँछ ? त्यो त प्रश्नै आउदैन नि। ओली नेताबाट राजनेतामा उक्लेको प्रश्नै हैन। उनका कार्यकर्ता र भक्तजनले कल्लाई के लेख्छन र भन्छन भन्ने कुरा त गौण हो नि। तठस्थ मान्छेले भन्नुपर्छ राजनेता कसलाई भन्छन भनेर। साउथ एसियामा अल्मोस्ट राजनेता भएको छैन, नेहरु हो कि भन्ने छ , ग्लोबल्ली हेर्दा ५ जना राजनेता छैनन्। विपी राजनेता भएका छैन। ओली कहाँबाट राजनेता हुन्छन ? पुष्पलाललाइ गद्धार भन्नेहरु यांही छन्। नेपालमा राजनेताको कन्सेप्ट नै छैन।
अब्सोल्युटली यिनीहरुसंग बहुमत छभने यिनीहरुलाई किन दुई तिहाइ चाहियो त ? कुरा त संबिधान संसोधनकै हो। नाकाबन्दीको बेलामा ओलीको जुन भारत बिरोधि भन्ने छबी बन्यो त्यो सही थिएन उनले नेपाली जनताको भारतीय हस्ताक्षेप्को बिरुद्धको आकांक्षालाइ प्रतिबिम्बन गरेका मात्रै हुन्।
पोलिटिक्स भनेकै त्यही हो, जे भनिन्छ त्यो गरिदैन र जे भनिदैन त्यही गरिन्छ। पोलिटिक्समा कतिपय कुराहरु पब्लिक कन्ज्युम्सन का लागि एजेन्डा बनाइन्छ। मोदीले कसरी चुनाव लडेका थिए भनेर सबैलाई थाहै छ।हरेक राजनीतिमा यही हुन्छ। ट्रंपले नै के एजेन्डामा चुनाव लडे त ?
पार्टी एकीकरण पछी प्रचण्डले पूराका पुरा नेतृत्वको सुनिश्चितता र स्थायित्व त्यहाँ खोजेका छन्। तर पार्टी एक हुनेमा मलाई अझै पनि शंका छ। पार्टीका कार्यकर्ताको मत जितेर नेतृत्वमा आउने कुरा हो भने प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा जित्दैनन। त्यसैले त्यो कुरा प्रचण्डले मान्दैनन।अहिले नै ४० र ६० को कुरा छ र अहिलेको अवस्थामा नै एमालेको २० प्रतिशत बढी छ भन्ने कुरा छ। महाधिबेशनमा त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड त ब्याक बेन्चमा बस्नु पर्ने हुन्छ। अनि प्रचण्ड ब्याक बेन्चमा गएर बस्छन त ? प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति चाहन्छन। प्रचण्ड भनेको पदको लागि राजनिति गर्ने मान्छे हुन्। पदको सुनिश्चितता भएन भने उनले पार्टी एकता किन गर्नु पर्यो ?
यो देशमा योग्य व्यक्तिको कमी छैन। राइट म्यान इन राइट प्लेस त् यो कन्ट्रीमा कहिल्यै पनि भएन त्यो चै समस्या हो।तर योग्य व्यक्तिलाई पनि योग्यतापूर्वक यो देशमा काम गर्न दिईदैन्।
मन्त्रि छान्दा प्रधानमन्त्री सजग हुन खोजेको जस्तो चै देखिन्छ। सुरुमा तीनजनाको उहाँले जुन नियुक्ति गर्नु भयो त्यसमा त्यो सूचना पाइन्छ।तर त्यसपछि उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन. उहाँले गृहमन्त्री जनार्दनलाई बनाउन चाहनु भएको थियो सम्भव भएन। अब भोलि उहाँले परराष्ट्रमन्त्री कसैलाई बनाउन चाहनु होला, त्यो उहाँले सक्नु हुन्। किनकि त्यो उपेन्द्र यादवलाई चाइहाल्छ। भोलि आपूर्ति र पूर्वाधार मंत्री कसैलाई बनाउन चाहनु होला तर त्यो राजेन्द्र महतोलाई चाहीहाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ ? उहाँले भनेको यहाँ केहि पनि कुरा हुन्छ त ?
संसदीय ब्यबस्था भनेको इथिक्स्मा चल्ने व्यवस्था हो। मोरल र इथिक्स भन्ने कुरा तपैले अवलम्बन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। यो तपाईमा भर पर्ने कुरा हो।
राष्ट्रपति पद सम्मानित पद हो। राष्ट्रपतिको नाम सुन्ने बित्तीकै गर्भले ढक्क छाति फुलोस् शरीरको रौ ठाडो होस् तर यहाँ ? कुरै नगरौ।
आफ्नो दुई बर्षे राष्ट्रपति कार्यकालमा गौरव गर्ने कुनै कुरा विद्यादेवी भण्डारीबाट भयो भन्ने मलाई किन पनि लाग्दैन भने एक त उहाँ त्यो पदमा पुग्ने समय भन्दा अगाडी नै त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। दोश्रो,राष्ट्रपति त्यो योग्यताबाट पुग्ने पद हैन भन्ने मेरो बुझाइ छ।